Alaskan Klee Kai Dog Taranka - Xaqiiqada iyo Shakhsiyadda - Taranka
Klee Kai waxaa laga soo saaray Siberian iyo Alaskan Huskies, oo ay weheliso caawimaadda Schipperke iyo American Eskimo si loo yareeyo bilaa cabsi. Sidan oo kale waxaad ka heli doontaa astaamo isku mid ah sida laga helo geedaha.
Iyagu waa dad xiiseeyaan, jecel yihiin, aad u xoog badan cabirkooda, ugaarsato xeeladeysan iyo fanaaniinta baxsadka ah. Klee Kai waa eey aad u firfircoon; si kastaba ha noqotee, maahan eeyga yar ee 'hyper' yar. Way qurux badan yihiin, wayna ku faanaan.
Magaca 'Klee Kai' waxaa laga soo qaatay ereyada Eskimo oo macnaheedu yahay 'eey yar'. Ku dhowaad 500 eey eey jiraan ayaa adduunka ka jira.
Naadiga Knee Kai ee Qaranka iyo Samatabbixinta
Klee Kai Heerka Naadiga Keenya National
Akhris Dheeraad ah:
Waxaa jiray shixnad shil ah oo ka dhacday Oklahoma bartamihii-70-meeyadii. Linda Spurlin, oo ah soosaaraha Klee Kai breed ayaa aragtay eeygan yar oo u eg Husky una maleeyay inuu kani noqon doono eeyga cabirka weyn leh.
Isla mar ahaantaana, walaalkeed oo ku nool Alaska wuxuu helay isla eeygaas oo kale wuxuu kaloo u maleynayay inuu yahay eeyga yar ee ugu fiican. Marka, waxay dejiyeen inay dhammaystiraan nooca. Mar dambe, Linda ayaa iskeed u sii waday ka dib markii ay iibsatay walaalkeed waana tan markii ay bilaabatay guusha dhabta ah.
Waxay ku qaadatay sannadahaas ugu horreeya iyada oo aan dib ugu soo laaban maalgashadeeda, iyada oo jeceshahay xayawaankan yar yar ee ay iyadu abuurtay. Waxay lahayd waqtiyo adag iyo sannado shaqo oo ay maalgashatay. Waxay iibisay eeykeedii ugu horreeyay iyada oo ujeedkeedu ahaa taranka bishii Diseembar 1988.
Koodhadhka iyo Xannaanaynta
Klee Kai, sida Siberia Husky, waa sahlan tahay in la daryeelo. Aad bay nadiif u yihiin. Badankood ma jecla cagaha qoyan waxayna saacado ku qaadan doonaan maalin kasta is-qurxin.
Iyagu ma leh “ur eyga” ama “neefta eyga”. Badanaa Klee Kai dhif ayey u baahan doontaa qubays.
Sida ka dhacday Alaskan Husky iyo Siberiyaanka oo ka duwan eeyaha timaha gaaban ee daadiya sanadka oo dhan, Klee Kai sidoo kale waxay dharbaaxo jaakadooda laba jeer sanadkii. Dabcan, cabirka eeyaha waxay xaddidayaan xaddiga dhogorta la afuufayo; hase yeeshe, wali waa cabsi.
Waxaa ugufiican in eyga loo hagaajiyo si joogto ah inta lagu jiro waqtigan. Qaar ka mid ah eeyaha dhaadheer ee dhaadheer ayaa matoobi kara haddii aan la hagaajin. Inta badan Klee Kai waxay caawin doontaa luminta timaha iyadoo xoqaysa waxyaalaha ay ka mid yihiin dayrarka.
Marka laga reebo xilligan jaakad la afuufayo, Klee Kai waa mid aad isugu filan. Tallaabooyinka kahortagga ee caadiga ah waa in la qaadaa, sida jarista ciddiyaha, qurxinta caadiga ah ee qaabka cadayga. Nidaamkani wuxuu si gaar ah muhiim ugu yahay geedi socodka isku xidhka.
Kai Klee Kai ee gurigaaga macnaheedu waa inaadan waligaa keligaa aheyn. Waxay kaa dhigayaan qosol xitaa haddii aadan rabin waxayna dejin karaan qalbi jaban sabab kastoo jirta.
Waxay noqdaan qayb aad muhiim ugu ah qoyska doorta inuu mid korsado. Badanaa way ka fogaadaan markay tahay shisheeyaha waxayna leeyihiin maskax u gaar ah.
Tani waa eey caqli badan. Runtii waxaan arkay eey lab ah oo ka furey xayndaabka silsiladda silsiladda si uu ugu tago dheddigga ku xiga. Waxaan arkay haweeney oo oodda jiidanaysa si labku uu ugu tuujiyo xayndaabka hoostiisa.
Waxay jecel yihiin inay dadkooda la joogaan. Haddii lagu meeleeyo jawi aan iyaga u roonayn, waxay helayaan wado ay uga baxaan.
Si ka duwan Siberian Husky, Klee Kai waa mid taagan oo shaki geliya shisheeyaha. Waxay sameeyaan ilaalin aad u wanaagsan. Way kula socodsiin doonaan marka qof ag joogo oo dhif iyo naadir ka ah wax aan waxba ahayn.
Waan hubaa inay noloshooda siin lahaayeen ilaalinta kuwa ay jecel yihiin. Klee Kai ma jecla in loola dhaqmo sida toy. Waxay rabaan in loola dhaqmo si ixtiraam leh. Maaddaama carruurtu mararka qaarkood ku xadgudbayaan rabitaankaas, carruurta kaliya ee garanaya sida loola dhaqmo xayawaanka ayaa ah saaxiibbada ay doorbidaan.
Eeyahaani waxay u muuqdaan inay yihiin eey yar oo gardarro ah haddii aan si habboon loo dhexgelin bulshada. Tan waxaan ula jeedaa inaan gudbiyo in Klee Kai ay u fiicnaan karto eeyaha qalaad ilaa inta shisheeyaha uu leeyahay ujeedo wanaagsan. Klee Kai guud ahaan waa isku kalsoon yahay eeyaha qalaad laakiin si naxariis leh ayuu ugu soo laaban doonaa ficil kasta oo gardarro ah.
Klee Kai waa mid aan raaxo lahayn markii sayidkiisu uusan ag joogin. Waxay aad u doorbidi lahaayeen inay isaga / iyada la safraan oo si sahal ah ku sameeyaan. Sawirka Klee Kai wuxuu noqon lahaa mid aan dhameystirneyn iyada oo aan loo gudbin jacaylkiisa iyo jacaylkiisa kalgacal ee sayidkiisa iyo xubnaha qoyskiisa.
Klee Kai waa ugaarsadeyaal. Haddii kor loo qaado ama loo soo bandhigo si sax ah, Klee Kai wuxuu la noolaan karaa bisadaha iyo guri ay shimbiraha ku nool yihiin. Dabcan, waxay caqli gal u tahay milkiilaha inuusan ka tegin shimbiraha daadanaya ee guriga ku wareegsan, ama uusan uga tagin Klee Kai isagoo aan ilaalin qol ay ku jiraan jeermisyo, hamsters, iwm.
Dareenkooda ugaarsiga ayaa ah mid aad u xiiso badan waxaana lagu yaqaanay inay wax ka cunaan. Mar alla markii aan heysto gerbil ku dhex wareegaya mid ka mid ah kubadahaas cad, Klee Kai wuxuu ku jiray guriga anigana taleefanka ayaan ku jiray.
Waxaan maqlay eeyga oo kubbadda ku garaacaya laakiin waxaan is tusay in gerbil uu nabad qabo. Waxa xiga ee aan ogahay, ayeeyaday ayaa guriga u soo cararaysa iyadoo ooyaysa in Sitka ay cunayso jeermiska. Taasi waxay ahayd jeermiskii ugu dambeeyay ee gurigeenna.
Waxa kale oo aan helay mid ka mid ah fuulitaankeyga oo fuulay qafis shimbir ah oo ka laadlaada istaagga. Waxay si fudud u fuushay miiska ka dibna ugu boodday dusha qafiska.
Waxaan haystay qaar badan oo ka mid ah Klee Kai oo la geeyay guryo bisaduhu ku yaalliin, xitaa waxaan haystay kalkaaliso biyo xireen ah oo laga tegey kittens. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar aan kaliya lagu kalsoonaan karin. Caadi ahaan waan ogaan doonaa eeyahaas ka hor intaysan gurigayga ka bixin.
Barking, Hadal, iyo Oohin
Sida kor lagu sheegay, Klee Kai maahan caadeysi caade. Iyagu waa kuwa hadalka sheega oo mararka qaarkood xusuusiya milkiilayaashooda inay la noolaadaan dhalinyaro. Klee Kai wuxuu jecel yahay inuu helo eraygii ugu dambeeyay, xitaa markay adeecaan amarka ay ka cabanayaan.
Klee Kai waa caato sida Husky oo kale. Caadi ahaan, waxaad ka heli kartaa aqal ka kooban Klee Kai oo wada heesaya subaxa hore ama habeenkii marka eydu aad isugu dhow yihiin. Waxay bilaabaan oo ay joojiyaan cabaadka sida haddii ay wax yihiin. Waxay sidoo kale u muuqdaan inay noqdaan kuwo maskaxiyan ah.
Way ogyihiin markay quudintu tahay, xitaa haddii tani aysan ahayn dhacdo la qorsheeyay. Waxay dareemi karaan markay wax qaldan yihiin xitaa marka laga saaro guriga sida qolka.
Waxaan ogaadey in noocani uu sifiican ugu shaqeynayo cunno ka kooban digaag iyo bariis. Waxay u baahan yihiin cunno qaali ah. Cunto eyda raqiis ah looma hayo. Summad magac wanaagsan ayaa ugu fiican. Waxay ubaahan yihiin shidaal badan si ay tamar ugu siiso astaamahooda.
Klee Kai waa cunsade bulsho. Markii lagu koriyo xeryaha, waxay u muuqdaan inay sida ugu fiican wax u cunayaan inta la daryeelayo laakiin waxay helayaan inta badan culeyskooda markay guriga la joogaan qoyskooda.
Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa ugufiican in lagu quudiyo eeyo jadwal si loo fududeeyo “tababarka dheriga”. Eyduhu waa in la quudiyo ugu yaraan saddex jeer maalintii. Dadka waaweyn waa la quudin karaa hal mar maalintii.
Inta badan dadka iska leh Klee Kai ayaa is-quudin doona marka eeyga la wadaago. Iyagu “ma jeexjeexaan” oo waxay u muuqdaan kuwo cuna cunnooyinka bulshada. Sababtaas awgeed, marar dhif ah ayay culeys saa’id ah saaraan. Eeyahaani waxay jecel yihiin miraha iyo khudradda sida digirta, galleyda, fersken, muuska, shiil walaaq, iyo noocyo kale oo badan.
Klee Kai waa eey qoys. Waxay u adkeysan karaan qabowga sida ku cad xaqiiqda ah inay ku horumariyeen Alaska. Guryahoodii caadiga ahaa waxaa ku yaalay guri eey ah oo caws ka buuxay.
Si kastaba ha noqotee, waxay ugu faraxsan yihiin dadkooda. Albaabada Doggie waa u fiican yihiin eeyahaas. Waxay jecel yihiin inay awoodaan inay soo galaan si ay u hubiyaan dadkooda mar mar. Aad ayey ugu fiican yihiin carruurta yaryar iyo xitaa carruurta.
Waxaa jira warbixino sheegaya Klee Kai oo daawanaya ilmaha guriga ku jira ka dibna u baxay inay waalidka ka hesho markii ilmuhu ooyay. Waxaa jiray biyo xireenno nuujinaya nuujinta.
Dayrarka ma qaban doonaan Klee Kai oo aan faraxsanayn. Inta badan Klee Kai ee qoysaskoodu soo celiyeen waxay ka yimaadeen guri ku dhammaaday kala tag. Waxay aad ugu nugul yahiin kala daadashada mana jecla.
Sidoo kale waxay ka tegayaan guri lagu haayo dayrka iyadoon la booqan guriga si ay ula joogaan qoysaskooda. Waxay si fudud u yihiin aqal ama sanduuq tababaran; si kastaba ha noqotee, ha ku xirin qol. Darbiyo iyo ood ayaa loo sameeyay si looga gudbo, loo hoos maro ama loo maro.
Sida Siberia Husky, daarad deyr leh ayaa lagama maarmaan u ah eeyga dibadda. Xayndaabku waa inuu ahaadaa mid xoog badan oo dhererkiisu yahay 6 fuudh. Dhulka waa inuu ku jiraa silig si loo joojiyo qoditaanka.
Klee Kai waxay jeceshahay inay qodo godadka; sidaa darteed, waxay noqon laheyd fikrad wanaagsan in la helo aag u oggolaan kara wax qabadkan iyada oo aan la baabi’in dayrka oo dhan. Sida eeyaha oo dhan, aagga aqalku waa u fiican yahay eeyga leh caado inuu baxsado.
Aagga buulku waa inuu ka samaysan yahay silsilad isku xidha silsilad, dusha shubka shubka. Xayndaabku waa inuu ahaadaa 6 fuudh oo dherer ah maadaama Klee Kai ay tahay fuule. Waxay u baahan doonaan guri eey ah laakiin inta badan waqtigooda waxay ku qaadan doonaan inay qorax ka soo baxaan.
Waxay jecel yihiin inay noqdaan 'Boqorka Buurta' sidaa darteedna had iyo jeer doortaan barta ugu sarraysa ee lagu heli karo xannibaadda.
In kasta oo eeyahaani ka soo farcameen The Alaskan Husky iyo reer Siberians, hadana waxay sameystaan ​​eeyo aad u fiican oo adeeca. Iyagu waa kuwo caqli badan laakiin waxay rabaan inay ka farxiyaan milkiilayaashooda.
Isku-dhafkan wuxuu keenaa eey wax uun ka baran kara wax kasta. Waa inaad bilowdaa adeecid goor hore. Samee xeerarka kuna dheji iyaga. Ogeysiiskaaga Klee Kai ha ogaado inaad adigu tahay madaxa.
Ha u ogolaan eeygaaga inuu wax u sameeyo sida eey oo kale oo aadan rabin inuu isagu / iyada sameeyo sida qof weyn. Haddii aad dhiibto xitaa hal jeer, waxaad xaqiijisay in xeerarka la sameeyay in la jebiyo.
Mar alla markii aad bartid eygaaga inuu sameeyo dabeecad gaar ah, ka filo inuu sameeyo markasta, markaa ha u oggolaan / yeelin inay sameyso wax aadan adigu rabin inuu sameeyo maxaa yeelay aad bay u adkaan doontaa si loo joojiyo tababarkaas.
Klee Kai waa xirmo u jiheysan; Sidaa darteed, waa inaad adigu iskaa u dhigtaa inaad tahay hoggaamiye baakad. Muhiim ma aha in la sameeyo liiska alfa ee sida caadiga ah loo tixraaco. Kaliya waa inaad dhiirrigelisaa ixtiraamka, oo aanad u xoog sheegan eeyga soo gudbinta.
Tabahaasi waxay ka dhigi kartaa eey ciil qaba, oo aan la saadaalin karin. Eygaaga ula dhaqan si ixtiraam leh isla markaana ka filo isla. Haddii aad si sax ah u tababbarto eeyahaaga isaga / iyadu way kugu raaci doonaan meel kasta.
Dareenkaas, fasallada tababarka kaliya maahan inay eey ku bartaan inay dhexgalaan oo ay kaaga jawaabaan xitaa waxyaabo jeedin kara, laakiin sidoo kale waxay ku baraysaa adiga iyo qof kasta oo kale oo qoyska ka mid ah amarrada saxda ah ee la adeegsanayo iyo sida looga jawaabi karo ilmahaaga. Iswaafaqsanaanta ayaa ah mid aad muhiim u ah oo fasalada tababarka waxay siinayaan qoyska meel ay kula tababaraan qof diyaar u ah inuu xoojiyo farsamooyinka tababarka saxda ah.
Xilliga tababarka sidoo kale waa waayo-aragnimo isku xirnaanta. Waxaad ogaan doontaa in Klee Kai-gaagu doonayo inuu noqdo kan ugu fiican wax walba. Khiyaanada eyga si wanaagsan loo tababaray ayaa kobcinaya caadooyinka wanaagsan, oo laga bilaabayo. Markii dhaqanka aad rabto caado ka dhigato, eygu uma badna inuu amarka jebiyo.
Awood u lahaanshaha eeyahaani waa caqabad weyn. Waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan ayaa ah inay eegaan Eey kale oo ku soo bandhigaya A-frame ama Buundada waxayna raaci doonaan iyadoo aan la helin jihada aadanaha. Kani waa nooca tababarka ee baashaal iyo wax soo saar leh. Milkiilaha iyo eeyga labaduba waxay leeyihiin baashaal barasho iyo raacida xeerarka.
Waxaad arki doontaa in loolanka eygaaga uu yahay habka ugu wanaagsan ee looga ilaalin karo isaga / iyada inuu caajiso oo uu dhibaato galo.
Waxa ugu xun ee aad sameyn kartid waa inaad dhacaan eeyahaas yar ee qaaliga ah. Dad badan ayaa hela mid ka mid ah eeyahaas waxayna ula dhaqmaan sida 'ilmahooda'. Eeyadu ma fahmaan kaalintooda haddii loo malaynayo inuu yahay ilmahaaga.
Eygiisa oo kaliya ayaa yaqaan sida loo mid noqdo. Markii lagu meeleeyo booska noocan oo kale ah, eygaagu wuxuu noqon karaa mid ula kac ah, dagaal badan oo guud ahaan aan fiicnayn inuu ag joogo.
Eeyadan ayaa si muuqata uga carooday cilladaha hidde-sidaha. Waxaan kaliya u oggol nahay kuwa sida daran u soosaara inay iibsadaan eeyo aan nafaqo lahayn. Dhammaan eeyaha yaryar waxaa lagu iibiyaa qandaraasyo khiyaano / dibedda ah, wada-lahaansho ama kuwa loo yaqaan 'breed daran'.
Waxaan aaminsanahay inay taasi sabab u tahay cilladaha. Waxaan soo marnay marmar daanka hoose, cryptorchidism oo waagii hore waxaa jiray eeyo ay ahayd in ilkaha ilkaha laga jiido oo aan soo bixin. Waxaa jiray eeyo noolaa markay ahayd inay dhintaan. Iyagu waa eey aad u adag oo adag.
Mararka qaarkood xishoodku wuxuu noqon karaa mushkilad: labada waalidba waa inay noqdaan kuwo wada socda oo saaxiibtinimo muujiyana wax raad ah oo xishood ama cabsi ah (oo aan lagu qaldin ka-fogaansho).
Feejignaan taxaddar leh waa in la siiyaa patella. Way fududahay in lagu horumariyo patellas raaxo leh eeyaha yar yar, sidaa darteed, taxaddar dheeraad ah waa in la siiyaa u janjeera suurtagalka ah ee keydkeena taranka. Waa inaad iska hubisaa in arday kasta oo aad ka fiirsanaysid uu waalidkiis ka baaray dhakhaatiirta xoolaha si ay ugu raaxaystaan ​​patellas.
Si kastaba ha noqotee, kuwa soosaara badankood waa kuwo aad u taxaddar badan, sababtaas awgeed, Klee Kai waa dhibaato muuqata oo bilaash ah xagga caafimaadka.
Sidee ayey ku heleen iyaga oo aad u yar?
Markii noocyadu ay bilaabmayaan waxaan aaminsanahay in Schipperke iyo American Husky loo adeegsaday in hoos loo dhigo cabirka Siberia iyo Alaskan Husky.
Ma heli kartaa Klee Kai oo leh indho buluug ah?
Haa, Klee Kai wuxuu yeelan karaa mid ama labadaba indho buluug ah. Waxay sidoo kale yeelan karaan il qayb uun buluug ah iyo qaybta kale bunni. Siberia-ka tan waxaa loogu yeeraa 'pinto eye', 'parti eye', ama 'eye split'.
Ma jiraan wax isha ku qaldan: eeygu si fiican ayuu wax u arki karaa. Tani waa astaamo caan ku ah Siberia Husky iyo Klee Kai.
Inta badan eeyaha yaryar waa yappy iyo hyper, sidee yihiin dabeecadaha Klee Kai?
Klee Kai waxay leedahay jilif ey weyn. Mararka qaarkood waxaan helnaa qayliye ama bugler sida aan ugu yeero. Codkani waxaa loo keydiyaa alaarmiga. Klee Kai waa eeyo aad mashquul u ah, laakiin ma ahan kuwa sarreysa. Iyagu waa hal-abuur iyo halabuur.
Waxay ku sii hayn doonaan milkiilayaashooda lugaha lugaha. Waxaa la soo sheegay in hal eey uu awood u yeeshay inuu galo weel dhaqe halkaas oo daweyn lagu qariyey. Waxay la mid yihiin isagoo haysta ilmo 2 sano jir ah.
Sidee Klee Kai u istaagtaa qabowga?
Tan iyo markii loo soo saaray Alaska, iyagu waa kuwo aad u adag oo dulqaad u leh qabowga. Barafka dhexdiisa waxay ku beddeli doonaan cagaha dhulka ku yaal, sidaas awgeedna waxay yareeyaan fursadaha qabow.
Waxaad ogaan doontaa in Klee Kai uu yahay mid laba jibbaaran. Klee Kai cawl iyo cadaan ayaa yeelan doona jaakad cad. Klee Kai madow iyo cadaan ah wuxuu yeelan doonaa jaakad cad. Yeyga cirro iyo cadaan ah Klee Kai waxay yeelan doontaa jaakad casaan ah.
Klee Kai casaan iyo cadaan ah wuxuu yeelan doonaa jaakad cad. Koodhka hoose ayaa muhiim u ah ka hortagga qabowga iyo kuleylka. Timaha dhaadheer ee ilaaliya ayaa Klee Kai ka ilaaliya qoyaanka. Klee Kai laba jeer sanadkiiba waxay daadin doontaa jaakadkeeda muddo labo ilaa saddex toddobaad ah.
Waxaan ku noolahay Mexico, sidee ayuu Klee Kai u sameyn doonaa cimilada kulul?
Klee Kai si la mid ah eeyaha kale waxay u baahan yihiin biyo badan iyo hadh inta lagu jiro xagaaga. Barkadda dabaasha ee cunuggu waa hab fiican oo eygu u qaboojiyo. Ey ku haynta gaariga, sanduuqa ama xayndaab kale inta lagu jiro xagaaga waxay sababi kartaa daal kuleylka.
Iyadoo aan lahayn wareegga hawada, kuleylka jirka eeyga ayaa noqon kara mid aad u badan. Sida eey kasta oo kale, ha kululayn eeyga adoo dhiirigelinaya jimicsi xad dhaaf ah inta lagu jiro kuleylka maalinta.
Klee Kai waxay jeceshahay inay cunto baraf, gaar ahaanna way ku qanacdaa xilliga kulaylaha. Klee Kai wuxuu daadin doonaa jaakadiisa xagaaga ka hor umana baahna in la xiirto. Tan looma baahna waana la niyad jabayaa.
Caqliga saliimka ahi waa inuu adkaadaa, eeygaaga ha gelin xaalad adiga laftaadu u dulqaadan kari weyday.
Klee Kai way jeceshahay caruurta oo aad wax weyn ula qabtaa inta cunugga lagu baray inuu xushmeeyo eeyga oo uusan ku kaftamin. Eeyahaani waa yar yihiin oo cunug aan xakameynin wuxuu noqon karaa khatar weyn.
Intabadan Klee Kai waxay siineysaa cunug fudeed ku filan oo ilmuhu u gaysan karo dhaawac culus kahor eeyga orodku. Milkiilayaasha wanaagsan waxay samaystaan ​​eeyo wanaagsan. Waxay umuuqdaan inay leeyihiin dareenkan lixaad ee ku saabsan ujeedooyinka cunugga waxayna badanaaba iska ilaalin doonaan ilmaha leh ujeedooyinka xun.
Yardku ma ku filan yahay Klee Kai?
Haa, inkasta oo ay u baahan yihiin laylisyo badan, waxay ku dhammayn doonaan tan deyr fiican. Haddii ay jiraan wax ka badan hal eey, waxay ciyaari doonaan cayrsasho. Hadday maya tahay, waxay eryan doonaan shimbiraha ama shimbiraha hooska, koronkorrada, masaska, ama wax kasta oo kale oo u muuqda in la eryanayo.
Sidoo kale waa lagu keydin karaa guri dabaq ah, waxaa loo soo saaray inay noqdaan diirkado xajmi ahaan loo siman yahay haddii milkiiluhu hubi inuu ku socon doono eeyga ugu yaraan saddex jeer maalintii.
Wax badan ma daadiyaan?
Haa, waxay daadiyaan laba jeer sanadkii. Waxay mariyaan dharkooda marwalba waxayna ubaahanyihiin cadayasho badan mudadan. Dabcan, markaad fiirineyso eyga 10 illaa 20-rodol, ma jiraan ku dhowaad timo badan oo xajmi ahaan si joogto ah u weyn.
Waxaan qabaa xasaasiyad oo eeyadan ma xumeeyaan, markaa dadka qaar ee xasaasiyadda ku leh eeyaha ayaa laga yaabaa inay u dulqaadan karaan kuwan, laga yaabee inay yihiin eeyo nadiif ah.
Sidee la yihiin eeyaha kale?
Kuwo badan, dhammaantood maahan, Klee Kai waa dagaal ku hayaan eeyaha kale ilaa ay si fiican u dhexgalaan sidii eyyo. Eeyahaani waxay u muuqdaan inay soo qaadayaan astaamaha eyga weyn haddii loo kiciyo mid.
Sidee yar yihiin?
Celceliska Klee Kai waa inta udhaxeysa 10 iyo 20 rodol, iyo 12 iyo 15 inji.
Yaan lahaan karin Klee Kai?
Qofkasta oo raba inuu eeygiisa ula dhaqmo sida cunugiisa wuxuu weydiisanayaa dhibaato. Qof kasta oo aan adkeysan karin timaha waa inuusan laheyn Klee Kai. Qof kasta oo u adkeysan karin dhunkashada eyga hubaal ma doonayo Klee Kai.
Qof kasta oo aan joogteyn karin waa inuusan laheyn Klee Kai. Qof kasta oo aan jeclayn in uu fiiro gaar ah u yeesho naftooda maxaa yeelay qof kasta oo arka Klee Kai wuxuu rabaa inuu ogaado waxa uu yahay, halka uu ka heli karo mid iyo inta ku kacaysa iyo qof kasta oo doonaya uun astaan ​​mansab.
Cunnadani ma aqoonsan tahay AKC?
Waxaan codsanay aqoonsiga AKC waxaanan sugeynaa jawaab waqtiga hada. Waxaan soo helnay dad badan oo raba inay soosaaraan Klee Kai, oo waliba raba inay awoodaan inay muujiyaan eeyahayaga, sidaasna ku codsado.
Waxaan sidoo kale fiirineynaa qaar ka mid ah dadka dalal kale oo doonaya inay ku lug yeeshaan noocyada laakiin ma isticmaali karaan meel kale oo ka baxsan AKC iyo FIC si ay u muujiyaan eeyahooda. Si loo bixiyo xaalada ugu macquulsan ee dadka aduunka oo dhan, waxaan u maleynayaa inay dan noogu jirto inaan ka qeyb galno Naadiga Kennelka Mareykanka.
Klee Kai National Kennel Club wuxuu wali ubaahan doonaa dhamaan eeyaha inay ka gudbaan shuruudaha hada jira si loogu diiwaangeliyo inay yihiin tayo taran ama muujiyaan eeyo tayo leh.
Naadiga Klee Kai National Kelub waxaa dhab ahaan la aasaasay bishii Ogos ee 1995. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee halbeeg lagu codeeyo lana sameeyo sharciyo hoosaadyo. Waqtigaan gaarka ah, naadiga wuxuu si rasmi ah ugu kulmaa hal mar sanadkii Klee Kai Picnic.
Kulankii iyo dalxiiskii waa la isku daray. Waxaan ku leenahay xubno badan USA. Waxaan u maleynayaa mustaqbalka, waxaan jeclaan lahaa inaan abaabulo shirar qaran oo internetka ah.
Waqtigaan, noocgu waa cusub yahay oo ma jiro suugaan la qaybiyey oo ku saabsan Klee Kai. Sida ugu dhow ee aad heli kartaa waxay noqon doontaa inaad hesho buug Siberia Husky ah. Waxyaabaha qaarkood way ka duwan yihiin, laakiin inta badan ee aad ka aqriso iyaga ayaa run ku noqon doona Klee Kai.
Klee Kai kama cararo guri wanaagsan umana qaldamaan kuwa kusoo xadgudba saaxiibada.
Jaangooyada noocyadu waa habka loo yaqaan 'karinta', haddii aad rabto, tijaabada ugu habboon ee noocaas. Heerkani waa gaadhiga loo adeegsado in lagu xukumo dhammaan eeyaha noocaas ah. Abuure kasta oo wanaagsan wuxuu ku dadaalaa inuu ugu dhawaado sida ugu macquulsan.
Ujeedo Asal ah: Klee Kai waxaa loo soo saaray eey weheliso Linda Spurlin.
Taariikhda Taranka Eeyadan ayaa laga soo farcamay Siberia iyo Alaskan Huskies.
Taariikhda ugu horreysa: Bartamihii 1970
Wadanka asalka: Mareykanka Mareykanka, gaar ahaan Wasilla, Alaska.
Klee Kai waa eey yar oo gudaha ah, deg deg ah oo fudud lugihiisa isla markaana dhaqdhaqaaq bilaash ah oo qurux badan. Jidhkiisa dhexdhexaadka ah, jidhkiisa si fiican u shiidan, dhegaha kacsan, iyo dabada la mid ah dawacooyinka ayaa soo jeedinaya dhaxalkiisa Woqooyi, sida Siberia Husky.
Qiyaasta jidhkiisa iyo qaabkiisu waxay ka tarjumayaan dhaxalkiisa aasaasiga ah ee isu dheelitirka awoodda, xawaaraha, iyo dulqaadka. Jiidida waa dareen xoogan waxaana lagu sameyn karaa saami ahaan xitaa eeygan yar.
Xaaladda saxda ah, Klee Kai waxay leedahay muruqyo adag oo sifiican u horumarsan mana qaadaan culeys saa'id ah.
Maaskarada wejiga waa astaamo lagu garto noocyadan waana in si muuqata loo arki karaa sababo la xiriira midabbo iska soo horjeeda. Isku-darka kala duwan ee calaamadaha maaskaro ayaa suurtagal ah. Maaskaro buuxa oo leh midab kala duwan oo ku yaal madaxa, indhaha hoostiisa, sanka hoostiisa iyo wejiga oo la maroojinayo.
Maaskaro saddex-meelood meel ah waa isku mid laakiin midab la'aan ayaa ka hooseysa indhaha hoostooda. Maaskaro badhkeed ayaa ka maqan midabka indhaha iyo hoostiisa, Widow's Peak oo ah tan ugu yar ee la jecel yahay waxay leedahay kaliya midab kala duwanaan ah oo madaxa ah oo wejiga ku dhajiya.
Is beddelka khafiifka ah, aagga wejiga waa inuu dib u fidiyaa si uu u daboolo lafaha daanka iyo hoos si loo daboolo aagga garka hoostiisa. Khasab maahan, laakiin waa suurad wacan in dhibco fudud laga helo indhaha korkiisa. Sidoo kale waa qasab in xariiq mugdi ah laga soo qaado bartamaha masarka.
Olol bartamaha foodda ama muuska la oggol yahay. Dhogorta ku taal gudaha dhegaha waa inay ahaadaan midab khafiif ah oo ka soo horjeedka ah sida maaskaro wajiga.
KHILAAFKA: Xuub isku midab ah illaa sanka hoostiisa, ama inyar oo midabkeedu isbarbar yari ku leeyahay bushimaha (sida maaskaro dawaco). Midabka indhaha hoostiisa wuxuu fidiyaa in kabadan kalabar wadada ilaa dhamaadka sanka (sida maaskaro dawaco).
Midabka indhaha hoostiisa wuxuu fidiyaa in kabadan kalabar wadada ilaa dhamaadka sanka (sida maaskaro aan jirin ama isku dheelitirneyn).
Dhererka iyo Miisaanka : Dhererka waxaa laga cabiraa engegga ilaa dhulka. Klee Kai waa inuu ahaadaa mid le'eg cabbir ahaan, mana u muuqdo mid culus ama aad u dhuuban.
Ciyaar - ilaa iyo 13 inji.
Gadaab - Ka weyn 13 inji iyo ilaa iyo 15inches.
Jaangooyo - In ka badan 15 inji illaa iyo ay ku jiraan 17 inji.
Baaxad Weyn - In ka badan 17 inji illaa iyo ka mid ah 18 inji.
Haddii qaybtan weyn ay si joogto ah u tuuraan eeyaha ka weyn kan jaangooyuhu u oggol yahay, markaa isagu / iyadu waa inay lumiyaan xaaladdeeda taranka laakiin maahan inay muujiso xaaladdeeda. Haddii mulkiiluhu jebiyo xayiraadda eeyo yaryar ee xayawaankan markaa isagu / iyadu sidoo kale way waayi doonaan xaaladdooda muujinta.
Miisaanka ayaa u dhigma dhererka.
Cabbiraadaha aan kor ku soo xusnay waxay matalayaan xadka dhererka xad dhaafka ah, iyada oo aan wax doorbid ah la siinaynin labada dhinacba
KHILAFKA : Eeyaha iyo bitches in ka badan 18 inji at engegay.
Indhaha - Yicibta u qaabeysan ama oval si dhexdhexaad ah wareega, dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Hadalku waa mid xiiso leh, laakiin saaxiibtinimo, xiiso leh iyo xitaa qallafsan, ayaa si ballaadhan loo furay oo dhalaalaya.
Midabka indhaha - wuxuu noqon karaa midab bunni ama buluug ah, mid kasta ama midab midab leh waa la aqbali karaa.
Khaladaadka: Indhaha oo aad u indho sarcaad ah; aad isugu dhow, sidaas u wareeji si aad ugu muuqato bullaacad.
Dhakada - Baaxad yar oo u dhiganta jirka, xoogaa isku wareejiyay dusha sare iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ilaa indhaha. Waa inuu cabbiraa shan-sideed-meelood illaa kala-badh oo ah madaxa laga bilaabo istaagga ilaa occiput.
Joogsiga waa in si cad loo qeexaa laakiin uusan aheyn mid aad u dheer. Dibnaha waa in ay ku dhegan yihiin qaniinyada maqaska.
Khaladaadka: Madaxa madaxa oo kacsan ama aad u culus oo jirka ku garaacaya cariiriga. Cillad weyn ayaa ah sanka barafka (pink streaks). Qaniinyo toosan ama qaniinyada maqasku waa khalad.
KHILAAFKA: Sanka midab kasta oo dhammaystiran oo aan ahayn madow ama shukulaato marka laga hadlayo eeyga midabkiisu cas-cas yahay.
Afka - Dhererka dhexdhexaadka ah, taasi waa, masaafada laga bilaabo caarada sanka ilaa joogsiga waxay u dhigantaa masaafada udhaxeysa joogsiga ilaa occiputka ama waxyar kayar sida seddex-sideedadka madaxa. Joogsiga ayaa si wanaagsan loo qeexay laakiin lama shaacin waana inuu u janjeeraa madaxa.
Buundada ayaa toos uga bilaabata joogsiga ilaa caaradda. Xuubka waa ballac dhexdhexaad ah, sanka si tartiib tartiib ah loogu taabanayo sanka, iyada oo caarada aan aad loo tilmaamin ama aan aad u gaabneyn oo laba jibbaaran. Dibnaha sifiican ayey ufiicanyihiin uguna dhawyihiin, ilkaha waxay kudhamaanayaan maqas qaniinyada.
Khaladaadka: Afka ku xir ama aad u fiiq ama aad u ballaaran, aad u gaaban ama aad u dheer, joogitaan aan kugu filnayn ama caan ah; qaniinyo kasta oo aan ahayn maqas.
U-QALMIDDA - Shaashad ka-baddan ama hoos-u-dhig.
Sanka - Madow ama shukulaatada eyda casaanka ah.
Dhegaha - Mid dhexdhexaad ah ama waxyar ka weyn laakiin ku jaan go'an, qaab saddex-geesood ah, iswaafaqsan oo madaxa sare leh. Waxay yihiin kuwo qaro weyn, si fiican u dhogor badan, gadaal waxyar ka qalooca, xoogna u dhisan, iyadoo talooyin yar yar oo wareegsan ay si toos ah u tilmaamayaan iyo dawacooyinka oo kale.
Saldhiga gudaha ee dhagaha waa inuu ka toosnaadaa inta udhaxeysa bartanka iyo cirifka gudaha ee isha kasta.
Khaladaadka: Dhegaha oo aad u ballaaran marka loo eego madaxa, aadna u ballaadhan; aan si xoog leh u taagnayn ama midab kala duwanaan karin ama aan ka ahayn midabka ka soo horjeedka jidhka intiisa kale.
U-QALMIDDA Dhegaha oo aan si xoog leh u taagnayn.
Qalliinka Isqurxinta lama oggola marka laga reebo in dheecaanka qoyaanka laga saari karo.
Midab - Dhammaan midabbada madow ilaa khafiifka ugu khafiifka ah, oo leh heerar kala duwan, iyo dhammaan caddaanka waa la aqbali karaa illaa iyo inta eygu uusan ahayn albino. Dhammaan eeyaha cadcad waa inay ahaadaan kareemo on cad oo looma oggola inay ku soo baxaan eey kale oo dhan cad.
Calaamadaha dhammaan qaybaha jirka waa inay u muuqdaan kuwo isku dheelitiran oo isha raalli ka ah. Calaamado kala duwan ayaa caan ah, si kastaba ha noqotee, dhinac walba waa inuu muraayad ka kale. Dibnaha waa inay madow yihiin marka laga reebo kiiska eyga cas, markaa bushimaha waxay noqon karaan shukulaato.
KHILAAFKA: Koodh cad. Calaamado kasta oo ku yaal jaakadda aan isu dhigmin. Ey midab kasta oo adag leh oo keenaya maaskaro iyo / ama aan lahayn midab lidi ku ah lugaha iyo hoosta hoose marka laga reebo eey cadaan ah oo ay tahay inuu noqdo kareem cad oo aan ahayn albino.
Meelo iskudhafan oo qeexan meelkasta oo ka mid ah jaakada (marka laga reebo indhaha korkiisa, olol ka dhaca bartamaha foodda ama muuska iyo caarada dhamaadka dabada).
Koodhka Klee Kai waa labalaab oo caadi ahaan dherer dhexdhexaad ah inkasta oo timaha dhaadheer ee Klee Kai ay yihiin kuwo si fiican loo aqbali karo, oo bixinaya muuqaal dhogor cad leh, laakiin weligiis sidaas uma dheeraynin si loo qariyo muuqaalka nadiifka ah ee eyga.
Koodhka hoose waa jilicsan yahay oo cufan yahay oo dhererkiisu ku filan yahay inuu taageero jaakadda sare. Timaha waardiye ee jaakadda kore waa toosan yihiin oo xoogaa siman yihiin, oo aan weligood qallafsanayn ama toos u taagnayn jidhka. Waa in la ogaadaa maqnaanshaha joodariga inta lagu jiro xilliga daadinta waa caadi.
Timo jarista suulasha cagaha iyo faraha dhexdooda si loo soo bandhigo muuqaal qurxan waa la oggol yahay. Goynta dhogorta qayb kale oo eey ka mid ah waa inaan la oggolaan waana in ciqaab adag la mariyo.
Khaladaadka: Aad iyo aad u dhaadheer, jaakad ah ama jaakad jilicsan, jajab aad u qalafsan ama aad u siman, jaakaduna waxay tahay sida mid mugdi gelinaysa qaabka eyga iyo goynta jaakadda, marka laga reebo sida kor lagu oggol yahay.
Dabeecad - Dabeecadda dabeecaddu waa mid saaxiibtinimo laakiin ilaalinaysa dhulka iyo qoyska, laakiin sidoo kale waa feejignaan iyo bixitaan marka la soo bandhigo, waa haddii kale is-hortaagidda shisheeyaha waxayna ku kacsan tahay xadgudbayaasha ha ahaadeen dad ama duunyo.
Wuxuu difaac ku yahay eeyo kale. Daacadnimadiisa iyo dabeecadiisa jacaylka ayaa isaga ka dhigaysa wehel weyn.
Luqunta - Dhexdhexaad dhexdhexaad ah, taasi waa qiyaas ahaan saddex meelood meel dhererka jirka, oo qalooca oo loo qaado si sharaf leh marka eygu taagan yahay. Markaad u dhaqaaqeyso sariirta, qoorta waa la dheereynayaa si madaxa wax yar horey loogu sii qaado.
Khaladaadka: Qoorta oo aad u gaaban oo qaro weyn; qoorta oo aad u dheer
Garbaha - Mashiinka garabka ayaa si fiican dib loogu dhigay xagal qiyaastii 45 darajo oo dhulka ah. Xaglaha kore ee kore waxyar gadaal ayey uga socotaa laga bilaabo barta garabka ilaa xusulka weligoodna kuma xirna dhulka.
Muruqyada iyo seedaha garabka ku haya qafiska feeraha waa kuwo adag oo si wanaagsan loo horumariyey.
Khaladaadka: Garbaha toosan; garbaha dabacsan
Laab Qoto dheer oo xoog leh ayaa murqo leh laakiin aan aad u ballaadhnayn, iyada oo barta ugu hooseysa ay tahay oo keliya gadaal iyo in yar oo ka sarraysa xusullada illaa kala badh masaafada u jirta engega ilaa dhulka.
Feerahu si wanaagsan ayey uga soo baxeen lafdhabarta laakiin wax yar ayey ka sarreeyaan xusullada illaa kala badh ka mid ah masaafada u engega dhulka. Feerahu si fiican ayey uga soo baxeen lafdhabarta laakiin waxyar bay dhinacyada ka wareegeen.
Khaladaadka: Laabta oo aad u ballaaran, “feeraha foosto,” feeraha oo aad u fidsan ama daciif ah.
Dib u laabo - Dhabarka ayaa toosan oo leh dusha sare oo heer sare ah oo ka bilaabanta engegga ilaa kudhalashada. Dhererka jirka laga bilaabo xuubka hoose ilaa badhida ayaa hal inji ama laba dheeri ka dheer qallajinta dhulka.
Dhexda ayaa kuxiran oo jilicsan, xoogaa ka cidhiidhsan qafiska feeraha, oo leh xoogaa faashad ah. Quruxleyda ayaa ka durkay dhabarka xagal, laakiin marna si qayaxan ugama hor istaagin riixitaanka gadaal ee lugaha dambe. Muuqaal ahaan, waa dherer dhexdhexaad ah oo bixinaya muuqaal ku dhowaad laba jibbaaran.
Khaladaadka: Daciif ama dib u dhig jilicsan; gadaal u ruxmay; Khadka toosan ee foorara
Lugaha iyo Cagaha
Hore - Markaad istaagto oo aad ka eegto xagga hore, lugaha si qunyar socod ah, isbarbar socda oo toosan, iyadoo xusulladu jidhka u dhow yihiin oo aan u soo jeedin ama u soo bixin. Dhinacyada laga daawaday, tiirarka ayaa si yar loo jilicsan yahay, oo leh wadajirka isku dhafan oo xoog leh, laakiin jilicsan.
Lafaha waa wax la taaban karo laakiin marna ma culus ama jilicsan. Dhererka lugta ee xusulka ilaa dhulka waa kala bar ama waxyar ka yar kalabar masaafada u engega dhulka si qalad ah oo kaliya in yar oo lugta ah.
Ku dhawaaqida sagxada lugta hore iyo gadaal waa laga saari karaa.
Khaladaadka: Tabaarro daciif ah, laf aad u culus; aad u cidhiidhi ah ama aad u ballaadhan xagga hore; xusullada soo jeestay ama soo baxay. Lafaha aad u jilicsan oo jilicsan ayaa u muuqda si ay u diidaan dhaxalka Siberian Husky. Si xad dhaaf ah ugu dheer lugta si aad ugu ekaato jaranjarooyin.
Xarunta dhexe - Markaad istaagtid oo aad gadaal ka fiirineysid, lugaha dambe waa si dhexdhexaad ah u kala fogyihiin oo is barbar socdaan. Bawdada kore waa muruq muruq, xuubabka si fiican u foorarsan, hock wadajirka ah oo si fiican loo qeexay oo hoos u dhigaya dhulka. Baaqyada (haddii ay jiraan) waa in laga saaraa.
Sawirka guud ee gadaalku waa inuu muujiyaa xoogaa awood ah maadaama Klee Kai markii hore laga sameeyay noocyada shaqeeya ee gobollada Arctic.
Khaladaadka: Aad u cidhiidhsan ama aad u ballaadhan xagga dambe.
Cilladaha waaweyn: Stifles toosan iyo lo'da lo'da.
Cagaha - Oval qaab ahaan, laakiin ma dheera. Kabaha lugaha waa yar yihiin laakiin uma muuqdaan kuwo jilicsan, is haysta oo si fiican u cadcad inta u dhexeysa suulasha iyo suufka s. Suufyadu waa adag yihiin oo cufan yihiin. Caan bixinimadu ma soo noqdaan mana soo baxaan marka eeygu ku jiraan xaalad dabiici ah.
Khaladaadka: Suulasho jilicsan ama jilicsan, lugaha oo aad u ballaaran oo cakiran, cagaha aad u jilicsan, suulasha ama banaanka.
Dabada - Dabada waa inay ahaataa mid dhex dhexaad ah iyadoo lafta dabada ah ay waxyar ka yartahay hock marka la dejinayo, laakiin ugu yaraan ay ku filan tahay in lagu rogo gadaasha oo wali la taabto dhabarka. Waa in sifiican loogu daboolaa timo dhaadheer.
Khaladaadka: Dabo calaamadeysan oo keliya.
Xiniinyaha - Eeyaha labka ah waa inay lahaayeen, oo ay awoodaan inay ku hayaan labada xiniinyood ee ku jira kiishashka maqaarka haddii aysan jirin wax shil ah oo sababa eeyga oo lumiya hal ama in ka badan. Xaqiiqadani waa inay diiwaangelisay Vet.
Khaladaadka: Jijim laba jibbaar ah ama sagxad siman oo dhabarka ah. Garsooraha waa inuu arkaa dabada dhabarka ugu yaraan hal mar inta lagu guda jiro tartanka.
KHILAAFKA: Dabo aan dhererkeedu dheerayn oo ay isku laabto si ay dhabarka u taabato.
Gait - Socodka astaamaha ee Klee Kai waa habeyn ama deer. Bawdada hore iyo lugaha dambe waxaa loo qaadaa si toos ah, iyadoo xusullada iyo guntimaha midna aan loo rogin ama laga bixin. In kasta oo eeygu uu sii jeedo, jadwalka dusha sare ayaa wali adag oo taagan.
Khaladaadka: Luming ama socodka rogrogmada; gudbaya, ama qabashada
Astaamaha noocyada ugu muhiimsan ee Klee Kai waa toy si cabirkiisu u weynaado, sameynta guryo waaweyn iyo eeyaha dhabta ah, lafo yaryar oo si wanaagsan isu dheellitiran, fudeyd iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa, jaakad habboon, madax iyo dhego lagu farxo, muuqaalka qosolka waqtiyada ciyaarta, dabada la moodo dawacada la laabay, dabeecada caqliga badan iyo dabeecada wanaagsan ee qoyska.
Muuqaal kasta oo ka muuqda lafo ama culeys xad dhaaf ah, ciriiri ama socodka cakiran, ama dheer, jaakad qallafsan waa in la ganaaxo. Labada jinsiba Klee Kai wuxuu muujiyaa muuqaal deg deg ah laakiin aan fududeyn oo jilicsan sida loo soo jeedinayo xayawaan ordaya.
Waa ugaadhsade; shimbiraha, dabagalayaasha, jiirka iwm oo caqli ku filan si uu uga gudbo wixii dhaliil ah oo uu leeyahay sida cabbirka, xawaaraha, iwm.
Marka lagu daro cilladaha horay loo soo sheegay, cilladaha qaab dhismeed ee muuqda ee guud ahaan noocyada oo dhan waa kuwo aan loo baahnayn Klee Kai sida nooc kasta oo kale, in kastoo aan si gaar ah loogu xusin halkan.
XULASHADA: Ey yaryar waxaa loo xukumaa sida ugu macquulsan heerarka dadka waaweyn. Ilaa cunuggu yahay madow iyo caddaan waa in la ogaadaa in Klee Kai eeyaha yaryar aysan helin midabkooda qaangaarka illaa ugu yaraan lix bilood da'da.
Cufnaanta jaakaddu ma ahan tan dadka waaweyn qiyaastii hal sano. Mararka qaar midabka indhaha hoostiisa ayaa soo muuqan doona ku dhowaad hal sano jir. Diga yar ee eygu si weyn buu isu beddeli karaa markii jaakadda dadka waaweyn soo gasho.
Maaskarada; si kastaba ha noqotee, waa inay jirtaa waqti hore. Ey yaryar oo lab ah waa inay lahaadaan labada xiniinyood ee ku jira sanduuqa maqaarka markay gaaraan lix bilood.
Macluumaadka Taranka Eeyaha: Sidee ayey dhif u tahay Red Husky?
immisa ayay yihiin eeyaha roodhida ah
chiwawa iyo shih tzu isku darka
xuduud badhkii collie badhkii Australiyaanka adhijirka
madow shih tzu yorkie mix